Vanhu Pekutanga Mutauro: Ini Handisi Wiricheya Yangu | Karman® Mawiricheya
Vanhu Pekutanga Mutauro: Ini Handisi Wiricheya Yangu
Funga nezve mutongo:
"Christopher Reeve anga ari wiricheya- mutambi akasungwa. "
Kune avo vanoziva nezve basa rake asati atambura tsaona inotungamira mukufa mitezo, ichi chingave chirevo chakakomba chemunhu akakurumbira uye anodikanwa. Nei zvakadaro, zvinogamuchirwa kuratidza vamwe nenzira dzakafanana - kunyangwe kana vakagara ne kuremara kubva pakuzvarwa?
Vanhu vanorarama nehurema vanosangana nematambudziko emagariro mazuva ese, uye vanogona kunzwa kusagadzikana kana vanhuwo zvavo vachivati ​​"remara vanhu ”. Kumwe kufunga kwekutanga kwemutauro watinoshandisa kutaura navo uye nezvevanhu vakaremara kunogona kuita musiyano wakakura mumhepo munzvimbo yebasa, mukirasi, munharaunda mamiriro, kana kunyangwe mukusanganidzana. Hunhu hwevakaremara sevanhu vekutanga uye pekutanga hunogona kuve mutsauko pakati pekucherechedzwa nekudzingwa kwemunhu anazvo kugona, zvido, uye kuda chinzvimbo. Semuyenzaniso:
"Ray Charles aive bofu muimbi" anoderedza zvaakaita, uye anozvimisikidza sezviri kuitika kunyangwe zvake kuremara. "Ray Charles aive muimbi ane mukurumbira pasi rose aive bofu" ndiko kuziva kweunhu hwake uye tarenda, pamusoro pe kuremara iyo yaaigara nayo.
"Helen Keller aive matsi uye bofu" anomutsanangura iye ega maererano naye kuremara, uye anoregeredza basa rake semurwiri wekodzero dzevanhu uye munyori. "Helen Keller aive munyori wemabhuku gumi nemaviri, uye aive munhu wekutanga matsi-bofu kuwana dhigirii reBachelor of Arts" anomuratidza semunhu aive akangwara uye aikurudzirwa, zvisinei nehurema hwake hwepfungwa.
"Franklin Delano Roosevelt anga ari remara wezvematongerwo enyika "anoita kunge tsananguro isinganzwisisike yemurume akazove mumwe wevatungamiriri vanoremekedzwa vemuUnited States. Zviitwa zvake zvinozivikanwa uye zvinoonekwa zvekuti vanokanganisa chokwadi chekuti akashandisa zvizhinji upenyu ari wiricheya semhedzisiro yehondo neporiyo. Izvi zvinobva zvaratidza kuti pane chikumbaridzo chinopfuura icho munhu anacho kuremara vanofanirwa kuwana mukana wekuzivikanwa kunze kwekukanganisa kwavo kwepanyama, kwekunzwa, kana kwekuziva?
Vanhu mutauro wekutanga unotsanangurwa sechimiro chemutauro chinotsvaga kubvisa hunhu hwevanhu vakaremara. Inobatsira avo vasingagare ne kuremara ziva vanhu vakaremara sevanhu vane hunhu uye zvitupa izvo zvakasiyana nezvavo kuremara. Iko kushandiswa kwakanyanya uye kwakaringana kwemutauro kuziva vanhu vakaremara nemazita avo.
Nekuti vanhu mutauro wekutanga wakanangidzirwa kuwedzera huwandu hwekuremekedzwa mukudyidzana pakati pevanhu vakaremara uye vanhu vasina, zvinokurudzirwa kuti kuve kutarisisa mukudyidzana kwakadaro kwese. Nekudaro, iyo chiyero chekushandisa kwayo inofanirwa kutemerwa mamiriro. Kana kusanganisa vanhu mutauro wekutanga mumutsara mumwe chete kunonetsa, uye kuchikonzera kuti mutauri agumburwe pamusoro pemashoko, zvinogona kunge zvisina kunaka kana kutsoropodza kuti vanhu vakajeka uye vakajeka mutauro wekutanga vashandiswe. Vamwe vanofunga kuti kunyatsoteedzera kune vanhu mutauro wekutanga kunoreva kunyanyisa kurongeka kwezvematongerwo enyika, uye kunotora chinongedzo kure nekutaurirana kunoshanda. Muzviitiko zvese, izvo yakakosha kutarisa mamiriro ekutaurirana, uye zvishuwo zvevanhu vanobatanidzwa. Zvimwechetezvo, kana bato rekutaurirana rikanzwa kuti chero mutauro unoshandiswa hauna kukodzera kana kuti haubatsiri, vanofanirwa kuzivisa izvi, nekuda kwekusimudzira nharaunda yekuremekedzana nekubatana kwakanaka.
Masangano mazhinji edzidzo anoshandira vana vadiki anokurudzira vanhu mutauro wekutanga kuitira kuti vagadzire nharaunda yekuremekedza uye kubatanidzwa mukutanga mukukura kwemwana munharaunda - zvese kuitira vana vanorarama nehurema, uye nevaya vasina.
Heano mazano kune rumwe ruzivo nezve vanhu mutauro wekutanga:
Chii chinonzi People Rurimi rwekutanga?
Vanhu Pekutanga Mutauro: Inonzwisisika kutarisisa kwevanhu mutauro wekutanga.
Vanhu Chokwadi Chekutanga Mutauro: Nhaurirano ine tsitsi inofarira kutorwa kwevanhu mutauro wekutanga.
Kutaurirana nevanhu Vakaremara: Mazano anobatsira kubva kuUS department reVashandi pakukurukura nevanhu vane mhando dzakasiyana dzehurema.
Kuratidzwa kwevanhu vakaremara: Chinyorwa chinopa mazano ekuratidzira vanhu vakaremara.
Kutaura nekuziva: Anotyora mimwe mienzaniso chaiyo yekusimbisa uye yakaipa mutauro.
Down Syndrome Vanhu Mutauro Wekutanga: Mirayiridzo yemashandisirwo aungaitwa mutauro wekutanga nezve vanhu vane chirwere chepasi.
Cerebral Palsy Vocabulary Mazano: Matipi e kushandisa vanhu mutauro wekutanga kureva vanhu vane cerebral palsy.
Vanhu Rurimi rwekutanga Mutauro uye Kurwara Nepfungwa: Gwaro rinotsanangura kushandiswa kwevanhu mutauro wekutanga kana uchitaurirana nevanhu vane chirwere chepfungwa.
Vanhu Pekutanga Mitauro Mitauro: Akawanda mazwi anoshandiswa nevaya vanoita vanhu mutauro wekutanga.
Mienzaniso Yevanhu Mutauro Wokutanga: Chinyorwa chevanhu mitauro yekutanga mutauro uye zvirevo.
kuremara Etiquette: Dzidza nzira dzakakodzera dzekudyidzana nevanhu vakaremara.
Kudzidzira Tsika Yakakodzera: Zano rakakura rekuti ungaremekedze sei vanhu vakaremara.
Vanhu Pekutanga Mutauro Mhinduro: Tsanangudzo pamusoro pevanhu mutauro wekutanga nemunyori ane mukurumbira uye mutauri weveruzhinji Kathie Snow.
Mifungo paVanhu Rurimi rwekutanga: Tsvaga zvinofungwa nevaAmerican nezvekushandiswa kwevanhu mutauro wekutanga.
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne1800wheelchair.
Kuremara Kwetsika: Beyond Wiricheya
State Kuwanikwa Mitemo